DFP : “Tsy hitondra inona io dinika momba ny lalàmpanorenana io” | NewsMada
DFP : “Tsy hitondra inona io dinika momba ny lalàmpanorenana io”
“Aminay, tsy mitondra inona ho an’ny firenena io dinika momba ny fanitsiana ny lalàmpanorenana io. Tsy hita koa izay dikany.” Izay ny fanehoan-kevitry ny mpitarika ny hetsika Dinika ho fanavotam-pirenena (DFP), Ratolojanahary Maharavo, tetsy Ambodivona, omaly, momba ny dinika hanitsiana ny lalàmpanorenana.
Aminy, tsy io ny dinika noresahin’ny DFP hatramin’izay hanavotana ny firenena amin’ny fandinihana ireo lohahevitra samihafa misakana ny fampandrosoana. Mandeha ila io dinika momba ny lalàmpanorenana io amin’izao.
Mitady izay hanemorana fifidianana ny mpitondra
Tapitra ny fe-potoam-piasan’ny filohan’ny Repoblika amin’ny 2018. Amin’izao fotoana izao, voatery mamoromporona zavatra izy hoe hanovana ny lalàmpanorenana, handinihana ny lalàna mifehy ny fifidianana. Amin’izany, ahoana ny hanemorana ny fifidianana filohan’ny Repoblika? Tadiavina ny fomba rehetra. Na ny fifanoherana ao anatin’ny HVM aza, tsy hain’izy ireo intsony ny mitantana azy amin’izao fotoana izao.
Dinika fandaniana andro io, famerezan-dia ny sain’ny olona: ilazana fa miasa sy manao zavatra be dia be ny fitondrana. Ny zavatra tokony hataon’ny fanjakana izao, manao adihevi-pirenena, na isam-paritra, na isaky ny kaominina momba ny pesta. Tsy hitan’ny fanjakana intsony izay ifehezana azy.
Tsy mendrika hitantana izao firenena izao intsony ny mpitodra noho ny tsy fahombiazana.
Handrotsaka kandidà amin’ny fifidianana ny DFP
Nohamafisiny fa handrotsaka olona amin’ny fifidianana ny DFP. Niteraka fifandroritan-kevitra tamin’ny vahoaka na tamin’ny mpiara-miombon’antoka hatrany ny fanjakana nifandimby tato ho ato. Amin’izao fotoana izao, misy andian’olona mivondrona hoe amin’ny fanoherana mieritreritra hamerina ny mpitondra teo aloha.
Mila fiovana sy fandrosoana i Madagasikara. Raha mbola haverina eo amin’ny fitondrana indray ireo efa nampiseho ny fahalemeny sy ny fahadisoany, tsy hitondra fiovana sy fampandrosoana eto amintsika.“Raha tena fiovana no atao, tsy maintsy mijery olon-kafa ankoatra an’ireo isika”, hoy izy.
Takiny ny fanatsarana ny tontolon’ny fifidianana, alohan’ny hirosoana amin’ny fifidianana.